Famaritana mifandraika amin’ny tabilao miovaova FPC - PCB Prototype, Fabrication, Factory, mpamatsy, mpanamboatra
IC Board test
PCB maro sosona
PCB Flex Rigid
» Blog » Famaritana mifandraika amin’ny tabilao miovaova FPC
Famaritana mifandraika amin’ny tabilao miovaova FPC
FPC dia ampiasaina amin’ny vokatra marobe toy ny telefaona finday, solosaina finday, PDA, fakan-tsary niomerika, LCMS, sns. Eto dia misy teny iraisana iraisan’ny FPC.
1. lavaka fidirana (amin’ny alàlan’ny lavaka, lavaka ambany)
Matetika izy io dia manondro ilay takelaka (amin’ny alàlan’ny lavaka hatao totohondry aloha) eo ambonin’ny vatan’ny tabilao miovaova, izay ampiasaina hifanaraka amin’ny velaran’ny faritra misy ny tabilao malefaka ho toy ny horonantsary anti-welding. Na izany aza, ny rindrina loaka misy loaka na fonenana matevina ilaina amin’ny fametahana dia tsy maintsy aharihary mba hanamorana ny famafana ny ampahany. Ilay antsoina hoe “lavaka fidirana” dia midika am-boalohany fa ny sosona ambonin-tany dia manana lavaka mitohy, amin’izay ny tontolo ivelany dia afaka “manatona” ny mpiray solder lovia eo ambanin’ny sosona mpiaro ambonimbony. Ny zana-kazo multilayer sasany koa dia misy lavaka miharihary.
2. akrilika akrilika
Izy io dia matetika fantatra amin’ny anarana hoe resin asidra polyacrylic. Ny tabilao miovaova indrindra dia mampiasa ny sariny ho horonantsary manaraka.
3. Adhesive adhesive na adhesive
Votoatiny, toy ny resina na ny firakotra, izay mamela ny interface roa hanatambatra ny fifamatorana.
4. Mitifitra hoho Anchorage
Amin’ny takelaka afovoany na tontonana tokana, mba ahafahana manamboatra pirinty boribory boribory mafy kokoa eo amin’ny tampon’ny lovia, maro ny rantsan-tànana azo apetaka amin’ny toerana be loatra ivelan’ny peratra lavaka mba hanamafisana kokoa ny peratra lavaka, mba hampihenana ny mety mitsingevana avy eo ambonin’ny vilia.
Amin’ny maha iray amin’ireo toetra mampiavaka ny tabilao mihetsiketsika, ohatra, ny kalitaon’ny tabilao miovaova mifandraika amin’ny lohan’ny pirintin’ny kapila solosaina dia hahatratra ny “fitsapana miondrika” in-arivo tapitrisa.
6. Fatorana fatorana sosona
Matetika izy io dia manondro ny sosona adhesive eo anelanelan’ny ravina varahina sy ny substrate polyimide (PI) amin’ny sosona sarimihetsika multilayer board, na TAB tape, na ny takelaka misy tabilao miovaova.
7. Akanjo lamba firakotra / fonony
Ho an’ny fizaran-tany ivelany misy ny tabilao miovaova, ny loko maintso ampiasaina amin’ny solaitrabe dia tsy mora ampiasaina amin’ny fantsom-panafody, satria mety hianjera mandritra ny hiondrika izy io. Ilaina ny mampiasa sosona malemy “acrylic” laminated amin’ny tampon-tabilao, izay tsy azo ampiasaina ho toy ny anti-welding film, fa koa miaro ny circuit ivelany, ary manatsara ny fanoherana sy ny faharetan’ny tabilao malefaka. Ity “sarimihetsika ivelany” manokana ity dia antsoina manokana hoe sosona fiarovana na fiarovana.
8. Birao malemy paika (FPC) malefaka
Izy io dia manondro ny tabilao mihodina izay mila ampiasaina amin’ny hetsika mitohy, toy ny tabilao miovaova ao amin’ny lohan’ny disk drive. Ho fanampin’izay, misy ny “static FPC”, izay manondro ny tabilao miovaova izay tsy miasa intsony aorian’ny famonony tsara azy.
9. Adhesive sarimihetsika
Izy io dia manondro ny sosona mifamatotra laminated maina, izay mety ahitana ny sarimihetsika lamba fanamafisana, na ny sosona manify amin’ny fitaovana adhesive tsy misy fitaovana manamafy, toy ny sosona mifamatotra amin’ny FPC.
10. Fitaovana pirinty malefaka, tabilao miovaova FPC
Izy io dia birao fizaran-tany manokana, izay afaka manova ny endrika habaka telo-habe mandritra ny fivoriambe any ambany. Ny sisin-taniny dia polyimide malefaka (PI) na polyester (PE). Toy ny tabilao mafy, ny tabilao malefaka dia afaka mametaka amin’ny alàlan’ny lavaka na pady adhesive ambonimbony amin’ny alàlan’ny fampidirana lavaka na fametahana dity. Ny tontolon’ny birao dia azo ampifandraisina amin’ny sosona malefaka ihany koa ho fiarovana sy tanjona fanoherana welding, na vita pirinty amin’ny loko maitso manohitra vy.
11. Tsy fahombiazan’ny reflexure
Ny fitaovana (takelaka) dia vaky na simba noho ny fiolahana sy ny famoritana miverimberina, izay antsoina hoe tsy fahombiazana miovaova.
12. Kapton polyamide soft material
Ity no anaran’ny varotra an’ny vokatra DuPont. Izy io dia karazan-taratasy “polyimide” mitafy lamba malefaka. Aorian’ny fametahana foil varahina calendered na foil varahina electroplated, dia azo atao fitaovana fototra amin’ny plastika malefaka (FPC).
13. Fanamainana membrane
Miaraka amin’ny sarimihetsika Mylar mangarahara ho toy ny mpitatitra, ny pika volafotsy (paty volafotsy na paty volafotsy) dia vita pirinty amin’ny fizaran-tsarimihetsika matevina amin’ny alàlan’ny fomba fanontam-pirinty, ary avy eo atambatra miaraka amin’ny gasket misy lavaka sy tontonana mipoitra na PCB ho lasa switch “touch” na fitendry. Ity fitaovana kely “lakile” ity dia matetika ampiasaina amin’ny calculatera tànana, rakibolana elektronika, ary fanaraha-maso lavitra ny fitaovana ao an-trano. Antsoina hoe “switch membrane” izy io.
14. Sarimihetsika polyester
Antsoina hoe takelaka PET, ny vokatra mahazatra an’ny DuPont dia horonantsary Mylar, izay fitaovana mahazaka fanoherana herinaratra tsara. Ao amin’ny indostrian’ny birao fizaran-tany, ny sosona miaro mangarahara amin’ny tontolon’ny sarimihetsika maina sy ny fonosana fanamafisana eo amin’ny sehatry ny FPC dia sarimihetsika PET, ary azo ampiasaina ho toy ny substrate an’ny faribolana volafotsy vita pirinty vita pirinty koa izy ireo. Amin’ny indostria hafa, izy ireo dia azo ampiasaina ho toy ny sosona fisisarana tariby, mpanova, coil na fitehirizana tubular an’ny IC marobe.
15. Polyamide (PI) polyamide
Izy io dia resin tsara indrindra polymerized by bismaleimide and aromaticdiamine. Izy io dia fantatra amin’ny anarana hoe kerimid 601, vokatra resina vovoka natomboky ny orinasa frantsay “Rhone Poulenc”. DuPont dia nanao azy ho takelaka antsoina hoe Kapton. Ity takelaka pi ity dia misy fanoherana hafanana tena tsara sy fanoherana herinaratra. Tsy fitaovana manta tena ilaina ho an’ny FPC sy ny kiheba izy io, fa koa takelaka manan-danja ho an’ny tabilao sarotra sy motherboard motherboard supercomputer. Ny fandikana ny tanibe an’ity fitaovana ity dia “polyamide”.
16. Reel hanakodia ny asa
Ny ampahany sy singa elektronika sasany dia azo vokarina amin’ny alàlan’ny fizotran-dresaka sy ny fihoaram-pefy (disk), toy ny vakizoro, firafitry ny IC, tabilao miovaova (FPC), sns. fenoy ny fiasan’izy ireo mandeha ho azy an-tserasera, mba hitsimbinana ny fotoana sy ny vidin’ny asa amin’ny fizarana tokana.
Category Blog (666) Fampahalalana momba ny orinasa (2) Vokatra (112) FR-4 PCB (21) HDI PCB (14) PCB Haingam-pandeha (5) IC Substrate (13) BGA (6) eMMc (1) Mini LED (2) SiP (1) IC Board test (4) Microphone PCB (29) PCB matetika (26) Rogers PCB (18) PCac Taconic (1) Telfon PCB (5) PCB maro sosona (18) PCB Assembly (12) PCB Flex Rigid (15) PCB manokana (11)